UJake White uxwayisa amaSharks uthi: “Sigijimiseni, uma ninesibindi!” | Scrolla Izindaba
UJake White uxwayisa amaSharks uthi: “Sigijimiseni, uma ninesibindi!”
Bambalwa abalandeli bebhola lombhoxo abazokuphika ukuthi iThe Blue Bulls neThe Sharks yiwona amaqembu afanelekile ukudlala umdlalo wamanqamu we-Carling Currie Cup e-Loftus Versfeld ePitoli ngoMgqibelo.
Kumdlalo owandulela owamanqamu e-Newlands eKapa, ​​okuwumdlalo wokugcina kuleyo nkundla, iWestern Province yavumela amaphenalthi amathathu yehla ngamaphuzu ayisishiyagololunye eqandeni ngemuva kwemizuzu emine yokukhahlelwa kwebhola nguCerwin Bosch. Abazange baphinde balulame emdlalweni osukhohliwe.
Ngesikhathi amabhubhesi ase-Gauteng elahlekelwe umdlalo wayo owandulela owamanqamu neThe Bulls ngamaphuzu amahlanu kuphela, lelo phuzu liyadukisa. AmaBulls abenamaphuzu abehola ngamaphuzu amabili imizuzu embalwa ngaphambi kwesikhathi esigcwele, angabe asagxila emidlalweni ngokuphelele. UElton Jantjies igoli alishayile belilindelekile. Imiphumela yamaphuzu ayisikhombisa yenze amaphuzu abukeke ehloniphekile kumlandeli ocabanga ukuthi kunesithunzi esithile ekuhlulweni ngomkhawulo omncane emdlalweni wokukhishwa.
Umqeqeshi uJake White, usomaqhinga encwadini yanoma ngubani, uzobe egcizelele eqenjini lakhe ukuthi amaphenalthi atholakala kunoma iyiphi indawo phakathi kwamamitha angamashumi amahlanu ezigxotsheni zabo mhlawumbe azophendulwa amaphuzu nguCurwin Bosch we-flyhalf.
Kodwa-ke, uMorne Steyn iflyhalf yamaBulls ungumkhahleli owaziwa umhlaba wonke uqobo futhi uzimisele ngokushaya amaphenathi. USteyn, ongeke azibize njengomhlaseli oqavile ophethe ibhola ngesandla noma umdlali wasemuva osezingeni eliphezulu, akungabazeki ukuthi uzoba ngaphansi kwengcindezi evela kuCurwin Bosch onekhono. UJake White angakhetha ukusebenzisa isikhungo esiphakathi nendawo, uCornal Hendricks njengomamukeli wokuqala, abeke uSteyn emuva ukuze athole ibhola endaweni ecacile.
Mhlawumbe lokhu kuyimbangela eyinhloko yokuphonsela inselelo kukaWhite umphakathi wamaSharks. “Sigijimiseni, uma ninesibindi,” esho ngoLwesine.
Ephepheni, imigqa yangaphambili iyafana ngokulinganayo, kodwa emncintiswaneni lapho umehluko omncane unomthelela omkhulu, amaBulls angaba namandla, ikakhulukazi emizuzwini engamashumi amabili yokugcina lapho sekuphakama khona umoya ongaphazamisa abadlali baseThekwini.
Emncintiswaneni wokaputeni, uDuane Vermeulen angaba unqenqema lukaLukhanyo Am, futhi lokho kungenza ukuthula emdlalweni.